Sida loo furo khadka telefoonka oo dooro ISP Faransiiska?
Furan khadka taleefanka oo waxaad ka heleysaa bixiyaha adeegga internetka ee Faransiiska
Posted by Tranquillus | Jul 2, 2018 | Si aad u degto oo uga shaqeyso Faransiiska
Waxaad dooneysaa inaad degto oo aad ka shaqeyso Faransiiska waqti dheer ama gaaban. Waxaad u badan tahay inaad u baahato inaad furato khadka telefoonka oo aad hesho adeeg bixiye internetka ku habboon. Halkan waxaa ah siyaabo aad ku ogaato meesha aad bilaabi lahayd.
Furo khadka taleefanka
Markaad rabto si ay u degaan France dhowr bilood ama sannado, inta badan waa lama huraan in la furo khadka taleefanka, gaar ahaan haddii aad rabto inaad ka faa'iidaysato gelitaanka internetka. Waa inaad ogaataa inaysan muhiim ahayn in la helo internet si loo furo khadka taleefanka.
Yaa furi kara khadka telefoonka Faransiiska?
Qof kasta oo deggan Faransiiska ayaa codsan kara inuu furo khad telefoon oo joogto ah ama taleefan oo Faransiis ah. Badiyaa waa ku filan tahay inuu caddeeyo aqoonsigiisa iyo inuu xaq u yeesho inuu degenaansho ku leeyahay Faransiiska.
Nidaamyadu waa sahlan tahay in dhammaan dadka cusubi u oggolaadaan in ay si dhakhso ah uga faa'iideystaan ​​adeegyada dhamaystiran. Xaqiiqdii, markaad timaado Faransiiska, furitaanka khadka taleefanka caadiga ah ama taleefanka ayaa badanaa ah mid ka mid ah talaabooyinka ugu horreeya ee la qaaday. Dabadeed hawlwadeennada ayaa daryeeli doona si ay u fududeeyaan tallaabooyinka si ay u soo jeediyaan in si degdeg ah loo furo khadka telefoonka.
Dadka ajnabiya ee yurub ama kuwa non-Yurub ah ayaa sidoo kale furan khadka telefoonka ee Faransiiska. Waa inay sameeyaan tallaabooyin dhowr ah oo ay dukumiintiyada qaarkood u gudbiyaan hawlwadeenka la doortay.
Talaabooyinka lagu furayo khadka telefoonka
Si aad u furato khadka telefoonka ee Faransiiska, waa inaad bilowdaa imtixaanka u-qalmitaanka. Midkani wuxuu u ogolaanayaa inuu ogaado dadka ka shaqeeya iyo tiknoolajiyada ay khadka u qalantaa. Sida caadiga ah, waxay qaadataa inta u dhaxaysa laba ilaa saddex wiig si aad u furto xariiq. Waqtigaani way kala duwan tahay iyadoo ku xiran wadayaasha.
READ Sidee ayaad u abuuri kartaa shaqadaa oo aad madaxbannaaneysaa?
Dadka degan guryaha yimaada ee xaruntoodu aysan wax firfircooneyn muddo ka badan lix bilood waa inay ku lug yeeshaan shaqaalahooda si ay u abuuraan xariiq cusub. Inta badan, dadka degan waxay dooran karaan isla telefoonkooda khadka taleefoonka iyo gelitaanka internetka.
Ajnebiyeyaashu waxay furan karaan khadka telefoonka ee Faransiiska. Hawlwadeenada xarumaha xawilaadaha iyo kuwa guurguura waxay si kastaba ha ahaatee rajeeyaan tiro dukumiinti ah oo ka timaadaa muwaadiniinta doonaya inay furaan khadka telefoonka Faransiiska. Sidaas daraadeed waa inay bixiyaan dukumentiyo taageeraya.
Taageerida dukumentiyada si aad u bixiso
Intooda badan shirkadaha ka shaqeeya khadka internetka iyo taleefanka waxay codsadaan dukumiinti taageeraya. Waxay muhiim u yihiin furitaanka khadka taleefanka (mobilada ama khadka tooska ah) waana sida soo socota:
Caddeynta aqoonsiga sida kaarka aqoonsiga qaranka ee Midowga Yurub, baasaboor shisheeye oo leh turjumaad Faransiis ah ama astaamo jinsiyeed, kaarka deganaanshaha ama ruqsadda degenaanshaha, buug wareega ama kaarka aqoonsiga shaqaale ka mid ah xubnaha maamulka dawladda qunsuliyada.
Macluumaadka xiriirka saxda ah;
Caddeynta cinwaanka (haddii ay tahay khad toos ah gaar ahaan);
Warbixin xisaabeed bangiga.
Shaqaalaha Gudaha iyo Teleefoonku ma soo rogi karaan Dakhliga tooska ah sida habka kaliya ee lacag bixinta macaamiisha. Tusaale ahaan, biilasha telefoonka waxaa sidoo kale lagu bixin karaa jeeg, bangiga, kaadhka deynta ama SEPA Direct Debit.
Doorashada Adeeg Bixiye Internet
Helitaanka Internet-ka (Wi-Fi) ee Faransiiska, waa lagama maarmaan in lakulmaan khad telefoon oo firfircoon. Kadib dhammaystirka talaabadaan, waxay ku filnaan doontaa inaad dooratid bixiyaha awood u leh inuu ku siiyo faa'iidooyinka ugu wanaagsan gurigaaga ama ganacsigaaga.
READ Waa maxay sababta ay u shaqeyneyso Faransiiska?
Shuruudaha lagu dooranayo alaab-qeybiyaha?
Ka hor intaadan dooran ISP, waxaad u baahan tahay inaad wakhti qaadato si aad u qeexdo baahidaada. Adeegyada ma loogu talagalay guri? Shirkad? Imisa farriimo ayaa ku howlan networkka?
Deynta ayaa shaki la'aan ah xogta ugu muhiimsan ee loogu talagalay ISP. Tani waa in lagu xisaabtamaa gaar ahaan marka ay caado u tahay in la wareejiyo faylasha waaweyn iyo faylasha waaweyn. Waxyaalaha kale ayaa muhiim ah marka qalabyo badan oo lagu xiro hal shabakad. Haddii isticmaalka Internetku uu kiciyo websaydhka websaydhka iyo la-talinta e-mailka, ka dibna debitku ma noqon doono mid aad muhiim u ah.
Dhanka kale, tirada adeegyada ee ku jira dalabku waa in sidoo kale lagu xisaabtamaa isticmaalaha. Qaar bixiyeyaasha qaarkood waxay bixiyaan khadado go'an, helitaanka internetka, kanaalada tv-yada iyo xitaa qorshooyinka guuritaanka ee hal dalab oo keliya oo la isku dayo.
Ugu dambeyntii, qiimaha dalbashada Internetku sidoo kale waa shuruud muhiim ah, gaar ahaan markaad timaaddo Faransiis si aad u barato ama u raadsato shaqo. Xaaladdan, ha ka waaban inaad is barbardhigto dalabyada.
Dooro bixinta adeegga internetka
Baakadaha iyo bandhigyada waxaa laga heli karaa dhammaan qiimaha. Waxaa jira bandhigyo heerar ah oo kaliya oo bixiya adeeg internet ah. Waxay ka faa'iideysan doonaan dadka ajaanibta ah ee imaanaya Faransiiska oo ay ka mid yihiin habab badan (ardayda, dadka raadinaya shaqo).
Waa inaad sidoo kale fiiro gaar ah u yeelatid khidmadaha qarsoon. Qaar ka mid ah hawl-wadeennada intarneedka ayaa mararka qaarkood soo bandhiga qiimeyaal aasaasi ah oo soo jiidasho leh kuwaas oo aan ku xisaabtamin kiraynta qalabka ama fursadaha dheeraadka ah. Kuwo kale waxay bixiyaan deeqo ku meel gaar ah oo laga yaabo inay faa'iido leeyihiin inta lagu jiro bilaha ugu horreeya ee isdiiwaangelinta. Ugu dambeyntii, waa in fiiro gaar ah loo yeesho muddada ballan-qaadku iyo haddii ay tahay mid khasab ah ama mid aan jirin.
READ Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Fasaxa Gaarka Ah
Tallaabooyinka lagu helayo helitaanka internetka
Si aad uga hesho gelitaanka internetka gurigaaga ama ganacsigaaga Faransiiska, waa inaad siisaa dukumiintiyo taageeraya hawlwadeenka internetka:
Dukumeenti aqoonsi oo ansax ah: kaarka aqoonsiga ee Midowga Yurub, sharciga deganaanshaha ama kaarka degenaanshaha, baasaboor xarfaha Latin ama turjumaad la socda
Qoraal xisaabeed bangi oo ku qoran magaca qofka heysta khadka internetka;
Caddaynta cinwaanka cinwaanka boostada ee ku taal dhulweynaha Faransiiska: biilka wadaha taleefanka, ogeysiiska canshuurta, biyaha, korantada ama biilka gaaska, ogeysiiska canshuurta golaha, iwm.
Si loo soo gabagabeeyo
Dadka ajnabiga ah ee yurub iyo kuwa non-Yurub ah waxay si fiican u furi karaan khadka taleefanka Faransiiska. Waxay sidoo kale ka codsan karaan shirkadda Internetka inay helaan qalabka lagama maarmaanka ah si ay u gashadaan internetka guryahooda ama ganacsigooda. Isagoo xaq u leh inuu ku nool yahay Faransiiska iyo aqoonsigiisa waa laba shuruudood oo caadi ah oo dhammaan dadka ka shaqeeya Internetka. Qof kasta oo shisheeye ah ayaa markaa ka dib heli kara internetka iyo telefoonka taleefanka loogu talagalay joogitaanka Faransiiska.
Furan khadka taleefanka oo waxaad ka heleysaa bixiyaha adeegga internetka ee Faransiiska Agoosto 19th, 2018Tranquillus
horeSharciyada la xiriira darawalnimada iyo baabuur wadidda ee Faransiiska
socdaSoo bandhigida barnaamijka tababarka internetka iBellule
Waa maxay faraqa u dhexeeya mushaharka saafiga ah iyo mushaharka guud?
Talooyin lagu furayo xisaab bangi oo Faransiis ah
Sidee u shaqeeyaa fasaxa mushaharka leh?
Sidee ayaad u abuuri kartaa shaqadaa oo aad madaxbannaaneysaa?